Masinina fanapoahana antsy, milina fipoahana, milina fitotoana antsokosoko - Ding Tai
Yancheng Ding Tai Machinery Co, Ltd dia orinasa miasa amin'ny fitaovana fanaovana sary hoso-doko, nitifitra ny fanadiovana fipoahana sy ny fanodinana ny fitaovana ary ny fananganana orinasa manokana. Orinasa miasa tsara, matanjaka ara-teknika matanjaka, izay manana traikefa amin'ny famolavolana sy famokarana taona maro. Ny vokatra dia amidy tsara any amin'ny firenena sy tanàna 40 mahery, izay ampiasaina betsaka amin'ny herin'ny rivotra, fiaramanidina, metallurgy, milina, fananganana, fanamboarana sambo, hazo akoho, fitrandrahana ary indostria hafa.
Fampidirana sy fampiharana ny milina fanapoahana mitifitra roller pass shot blast dia mitaky fitsaboana amin'ny fantsom-bolo vy sy fantsom-basy mitifitra amin'ny maripanan-javatra amin'ny alàlan'ny hafainganam-pandeha fipoahana. Raha oharina amin'ireo haitao fitsaboana hafa rehetra, dia haingana kokoa ...
Momba ny orinasa Dingtai: ny milina fitifirana antsika dia nanala tamim-pahombiazana ny loto, ny madio ary ny ara-pihoarana. Mifandraisa aminay, afaka manampy izahay: mampihena ny Downtime Mampitombo ny famokarana fotoana avo famokarana avo ...
nitifitra fatratra Spare Parts, tifitra Peening Machine, H miendrika basy mitifitra, Masinina fipoahana baomba, Fanapoahana tsiro, Kodiarana fanapoahana tifitra, Ny vokatra rehetra